Cabdikariin Axmed Mooge oo loo doortay Maayarka Hargeysa | KEYDMEDIA ONLINE
Cabdikariin Axmed Mooge oo loo doortay Maayarka Hargeysa
Isbahaysigii Siyaasadeed ee Xisbiyada Waddani iyo Ucid, ayaa u muuqda inuu noqday mid mira dhalay, kadib markii ay dhib la’aan ku qaateen Maayarrada Harheysa.
Hargeysa, Soomaaliland - Wararka ka imaanaya Magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in saaka si rasmi ah loogu doortay Maayirka Magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge, oo ahaa shaqsigii codadkii ugu badnaa taariikhda ka helay doorashooyinkii isku sidkanaa ee dhawaan ka dhacay Soomaaliland.
Inkastoo billowgii Olalaha doorashada Duqa Magaalada, ay ku tartamayeen, Cabdiraxmaan Solteeko oo ahaa maayarkii xilka hayay, Cabdikariin Axmed Mooge oo hadda ku guuleysatay iyo Siciid Cabdisamed Cudhay oo ka sharraxnaa Xisbga Ucid, hadana ugu danbeyn guud ahaan Axsaabta ayaa u tanaaslay Mooge.
Tirada codadka uu ka helay Doorashooyinkii ka dhacay Hargeysa, ayaa saadaal hordhac ah u ahayd guusha Mooge, sida ay qabaan dadka u dhuunduleela arrimaha doorashooyinka, laftirkiisu, wuxuu dhowr jeer ku celceliyay inuu in la ixtiraamo dareenka Shacabka.
Cabdikariin wuxuu xubin firfircoon ka yahay Xisbiga Mucaaradka ah ee Waddani, wuxuuna ahaan mudanihii codadkii ugu badnaa helay xisbi ahaa, wuxuuna shan laab ka sareeyay musarraxa Xisbigiisa ee cod ahaan ku soo xigay, isla markaan wuxuu ku dhawaad saddex laab ka horreyay muharraxa ugu codka badnaa Xisbiga talada haya ee Kulmiye.
Isbahaysigii Siyaasadeed ee Xisbiyada Waddani iyo Ucid ayaa sababay guusha mucaaradka, waxaana guddoomiye ku xigeynka Caasimadda loo doortay Khadar Axmed Cumar, oo kasoo baxay xisbiga UCID